Trondro disko: ny mpanjaka anaty ranomasina mba hahatonga ny mpitsidika anao ho tia | Bezzia
Trondro disko: ny mpanjaka aquarium mba hahatonga ny mpitsidika anao ho tia
Bezzia | | an-trano, Mascotas
Iray amin'ireo trondro Aquarium misehoseho sy miloko kokoa ny trondro discus, mampiavaka ny fananana hatsarana tsy manam-paharoa noho ireo loko isan-karazany mandrafitra azy.
Noho izany, hanazava ny zava-drehetra momba ny trondro discus isika, avy ao toetra, ny fiahiahiana, la fandikana ary ny mifanentana amin'ny trondro hafa. Torolàlana feno hananana azy io ho toy ny loharanom-pahalalana ary hanatratra fitomboana ara-pahasalamana sy fampandrosoana ny biby.
1 Toetoetran'ny trondro Discus
2 Karazan-trondro kapila
2.1 Trondro disco Heckel
2.2 Symphysodon discus brown
2.3 Trondro diskus manga
2.4 Symphysodon discus maintso
3 Fikarakarana trondro Discus
3.1 Ny aquarium trondro disk
3.2 Inona no nohanin'ny trondro discus?
4 Famokarana trondro discus
5 Mampifanaraka trondro Discus
Toetoetran'ny trondro Discus
Trondro Discus, antsoina koa hoe Discus symphysodon -dia anarana siantifika-, an'ny fianakavian'ny cichlids. Hita ao amin'ny Reniranon'i Amazon, na izany aza, ao amin'ny fivarotana biby fiompy dia avy amin'ny mpiompy, noho izany dia lehibe kokoa ny fanoherana azy. Manana a fe-potoana maharitra 12 taona.
Trondro tratra matetika izy io 25 santimetatra ny halavany. Biby misy a endrika boribory sy fisaka, ary misy tsipika miakatra hatramin'ny loha ka hatramin'ny rambony. Ny vombony dia manana endrika telozoro handehanana haingana amin'ny rano. Lehibe ny mason'izy ireo ary mena matetika.
Ity biby anaty rano ity dia somary saro-kenatra sy mampatahotra, ka asaina tsy manelingelina azy loatra sao marary izy (ohatra: noho ny adin-tsaina).
Raha ny loko, ny trondro discus dia mety manana alokaloka samihafa, amin'ny manga mainty, mavo, fotsy na mena midorehitra.
Zavatra tena mampiavaka ny trondro discus ny Tsipika mainty 9 mitsangana izay tsy hita foana ary manondro ny anao toe-po.
Raha ny mahasamihafa ny lahy sy ny vavy dia lehibe kokoa ny lahy ary lehibe kokoa ny lohany. Ary koa, rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny fiompiana, dia lasa mipoitra ny papilla ara-pananahana (amin'ny vehivavy, lasa boribory izy io).
El ny trondro kapila tany am-boalohany dia manana loko efatra samy hafa: maintso, volontany, heckel ary manga. Na izany aza, androany ianao dia afaka mahita santionany amin'ny loko hafa, toy ny mavo mena, fotsy na hybrid amin'ny loko isan-karazany.
Raha jerena ny loko tany am-boalohany, ny karazana trondro discus izay misy dia:
Trondro disco Heckel
Izy io dia tompon'ilay karazana, hita tao amin'ny Rio Negro (Brezila) nataon'i Heckel tamin'ny 1840 (noho izany no anarany hanaovana batemy an'ity trondro ity).
Sarotra be ny miteraka aquarium satria marefo izy io ary mitaky fepetra manokana ahafahany miaina. Izy io koa dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa satria ny tadiny fahadimy dia matevina sy mainty kokoa noho ny trondro hafa mitovy karazana aminy.
Raha ny loko kosa dia mazàna mena na manga.
Symphysodon discus brown
Araka ny tondroin'ny anarany dia trondro misy volontany volontany izy io, izay mety manomboka amin'ny maizina ka hatramin'ny maizina. Toy ny teo aloha, sarotra ny mitazona azy ho an'ny fepetra ilainao.
Ny iray mampiavaka azy dia ny manana kofehy miloko amin'ny vatany, indrindra amin'ny vombony sy amin'ny loha.
Trondro diskus manga
Ny lokony dia manarona ny lokon'ny manga rehetra ary koa misy striations mitovy loko eo amin'ny faritry ny vombony sy ny loha (ary ny sasany amin'ny vatana).
Ity specimen ity dia iray amin'ireo lafo indrindra hatramin'izay trondro discus manga mety mitentina 90 euro mahery.
Symphysodon discus maintso
Miaraka amin'ny aloky ny maitso samihafa (manomboka amin'ny maintso mavo na maitso mavo). Ny lokony maintso mazàna dia moto ao amin'ny faritry ny lohany, ankoatry ny fikolokoloana somary maizina (saika mainty) miampita mitsivalana ny vatany.
Fikarakarana trondro Discus
Ny fikarakarana fototra dia mirakitra olana lehibe toy ny famahanana ireo trondro discus, ny fiterahana azy, ireo aretina izay misy fiantraikany eo aminy na ny toerana mety amin'ny fitomboany.
Ny aquarium trondro disk
Satria trondro vaventy izy ireo, dia mila aquarium mety (sy malalaka) hipetrahana. Raha te hiteraka koa ianao, ny haben'ny ambany indrindra amin'ny Aquarium dia 200 litatra. Ny hafetsena hahafantarana ny haben'ny aquarium dia ny fampitomboana ny haben'ny trondro. Amin'izany fomba izany, ny trondro 20-sentimetatra dia mitaky aquarium 40-litatra. Raha manana trondro kapila 4 ianao, dia 100-120 litatra farafahakeliny no ilaina (raha toa ka aquarium 200 litatra ny tolo-kevitra.
Ny mari-pana amin'ny rano dia tsy maintsy eo anelanelan'ny 25 sy 30 degre raha ny PH kosa dia tokony ho asidra, misy sanda eo anelanelan'ny 5,5 sy 6,5, miaraka amin'ny rano malefaka sy kely mineraly.
Ampirisihina hanana izany ianao zavamaniry, hazo ary vato aiza no azonao afenina raha mahatsiaro voarahona ianao? Ny zavamaniry anaty rano lehibe dia mety indrindra amin'ireo trondro ireo.
Zava-dehibe ny 50% ny rano aquarium miova indray mandeha isan-kerinandro ka mihena ny nitrates ary fenoina ny mineraly ao anaty rano.
Farany, tsy maintsy misy a rafitra filtration mahery mba hadio hatrany izy io ary ny toe-piainan'ny aquarium dia mety hisorohana aretina.
Inona no nohanin'ny trondro discus?
Na dia eo aza ny zava-misy fa ny trondro discus dia omnivorous, ny tena izy dia manana filan-tsakafo ho an'ny hena izy ireo. Ny sakafo mety indrindra ho an'ity biby ity dia kankana, kankana na daphnia, fa azonao atao koa ny manome haza maty mangatsiaka na koa fo fo hen'omby.
Araho io sakafo io legioma maina sy flakes.
Manana karazan-tsakafo hafa ianao ao amin'ny magazain'ny biby fiompy, toy ny sakafo maina manampy anao hahazo ny otrikaina rehetra ilainao izany (fa ny azy irery dia tsy sakafo feno izany.
Ny tsy fananana aquarium sahaza azy, miaraka amin'ny fepetra ilaina amin'ny ain'ny trondro discus, ary koa ny sakafo tsy dia tsara, dia mety hitarika fisehoan'ny aretina ao amin'ireo trondro. Ireo dia mety vokatry ny bakteria, viriosy na zavamiaina bitika.
ny aretina trondro matetika discus Izy ireo dia:
Hexamithiasis. Noho ny tsy fihinanan-tsakafo. Amin'ity tranga ity dia tsy hanana vitamina D. Ho fanampin'izany, ny kalitaon'ny rano dia mety hiteraka azy koa (tsy fisian'ny oksizena na santionany be loatra). Mampiavaka azy ny famoronana ratra manodidina ny maso, izay mamoaka ranoka fotsy.
Aretina Dactylogyrus. Izy io dia zavamiaina bitika (metazoan) izay mahatonga ny trondro tsy afaka miaina tsara amin'ny alàlan'ny rivotra. Ho fanampin'izay dia hisy fiatraikany amin'ny santionany bebe kokoa satria mora voan'ny aretina izy io.
Famokarana trondro discus
Ny trondro kapila dia iray amin'ireo mahatoky indrindra amin'ny fanjakana an-dranomasina. Rehefa misafidy namana ianao dia mandrakizay izany. Na izany aza, rehefa hiteraka any anaty aquarium dia tsy mora ny manatratra izany ary mitaky fahalalana manam-pahaizana hahatratrarana azy.
Ny famokarana dia manomboka amin'ny karazana fiarahana amin'ny dihy izay raha mahomby dia hahatonga ny vavy hametraka atody 60 ka hatramin'ny 200 ho zezika lahy izany. Ireo atody ireo dia matetika apetraka amin'ny sehatra mitsangana sy / na malama amin'ny aquarium ary, amin'ny raharaha iray 4-5 andro, ho foy izy ireo. Ny endasina dia handray ny sakamalaho ary izany dia rehefa manomboka milomano manodidina ireo "ray aman-dreny" izy ireo ary hihinana ny tsiambaratelony. Rehefa somary antitra izy ireo dia mila porridge manokana sy nauplii patsabe mba hitombo tsara.
Mampifanaraka trondro Discus
Soso-kevitra ny tsy hanana trondro kapila tokana ihany, fa farafahakeliny kopia efatra (eo anelanelan'ny 4 sy 12 no mety indrindra) satria biby mifindra vondrona izy ireo. Anisan'izany, misy trondro miasa ho mpitondra na manjaka. Mampiavaka azy amin'ny hafa izany satria izy no mihinana voalohany ary afaka miala amin'ny trondro hafa koa.
Na eo aza izany fahasamihafana eo amin'ny toerana misy izany dia ny marina miara-miaina tsara miaraka amin'ny trondro hafa, toy ny Loricars, trondro Tetra na Cyclics Dwarf.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Trondro disko: ny mpanjaka aquarium mba hahatonga ny mpitsidika anao ho tia
Fetsy hampiasa sy hampihatra tsara ny fanafenana ny boribory maizina
Fantsaka lovia azo ampiharina 5 ho an'ny lakozianao